Farmaajo oo dad Shacab ah kula tukaday Muqdisho iyo farriin uu u dhiibay | Jubbaland Media Online
Farmaajo oo dad Shacab ah kula tukaday Muqdisho iyo farriin uu u dhiibay
Posted on June 16, 2017 in Feat, Wararka // 0 Comments
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Max’ed C/laahi Farmaajo ayaa maanta salaaddii Jimcaha dad shacab ah kula tukaday Masjidka Isbaheeysiga ee magaalada Muqdisho.
Madaxwaynaha oo markii salaadda laga baxay kadib khudbad ka jeediyay halkaasi ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho in ay dowladda kala shaqeeyaan dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in shacabka looga baahanyahay in ay kaalintooda qaataan islamarkaana laamaha ammaanka ku caawiyaan sidii ay u sugi lahaayeen amniga islamarkaana looga hortagi lahaa kooxaha kasoo horjeeda nabadda iyo horumarka dalka.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in kooxaha dowladda kasoo horjeeda ay doonayaan in Soomaaliya ay ka dhigaan dal fashilmay oo dib ugu laabto dagaallo iyo iyo dhibaatooyinkii laga soo gudbay, isagoo intaa u daray in beegsanayaan goobaha ay bulshada isugu timaado taana ay muujineeyso in shacabka iyo dowladuba ay dagaal kula jiraan.
Hadalka Madaxwayne Farmaajo ayaa kusoo beegmaya ayadoo dhawaan kooxo hubeeysan oo ka tirsan Al-shabaab ay dad badan ku laayeen dhismaha Pizza House, halkaa oo ay dhalinta isugu tagi jirtay si ay waqti ugu qaataan.